Guddoomiye Thaabit oo ku dhawaaqay olole nadaafeed oo ka bilaabanaya Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Guddoomiye Thaabit oo ku dhawaaqay olole nadaafeed oo ka bilaabanaya Muqdisho (SAWIRO)
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa maalintii shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay olole nadaafeed oo dib loo soo celinaayo billicda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Guddoomiye Thaabit ayaa sheegay in ololahaan uu qeyb ka yahay dib usoo celinta billicda magaaalada Muqdisho, isagoona shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qeyb qaataan ololahaan la doonayo in magaalada looga dhigo mid qurxoon.
“Mustaqbalka aynu ka hiigsanayno magaalada Muqdisho waa mid aad u sareeyo, waxaan maanta ku dhawaaqnay olole nadaafadeed oo aan guud ahaan magaalada uga dhigi doonno mid qurxoon, waxaa loo baahan yahay in qof kasta soo muwaadin Soomaaliyeed ah uu si hagar la’aan ah uga qeyb qaato ololehaan” Sidaas waxaa yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuu isaga billaabi doonno olole nadaafadeed oo billicda magaalada Muqdisho dib loogu soo celinaayo, isagoona ka digay in qashin lagu daadiyo goobaha ay billicda magaalada dhaawaceeso.
Hadalkaan kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho uu ka da’ayay roob aad u xoogan oo burbur aad u xoogan u geystay qaar ka mid ah wadooyinka ku yaalla magaalada.